कतारमा रोकिएन नेपालीको अराजक गतिविधि-देशकै बदनाम हुने खतरा
46089549 1196639 11540089 33352821
अक्टोबर महिनालाई खाडीमा गर्मीको आखिरी महिना मानिन्छ । त्यसैले होला कतारमा हिजो शुक्रवारका दिनमा त्यति घाम चर्किएको थिएन । विगत एक महिनादेखि कतारको पर्यटकीय स्थान कर्नेसमा केही नेपालीहरूले झम्के झालको सुरमा सुन्दरीका लागि मच्चाइरहेको वितण्डाको नियमित फलोअप गरेर ब्लग लेखिरहेको थिएँ । ब्लगको आशय त्यहाँ हुने अवैधानिक कार्यहरू रोकिनु पर्दछ र हामी सच्चिनु पर्दछ भन्ने मात्र थियो ।विगत पाँच हप्ताका गतिविधिलाई प्रत्यक्ष नियाल्दा कर्नेसका केही “चुल्ठे मुन्द्रे” हरू र तिनका गतिविधिहरू रोकिने या फेरिने कुनै सङ्केत पाइएन । दिउसोको ३ बजे ३८ डिग्रीको गर्मीमा पार्कमा बसेर टनक्क लोकल रक्सी पिएर “मैले चाहे भने जे पनि गर्न सक्छु” भन्दै लटपटिएको बोलीले धम्की दिएको समेत देखियो,सुनियो । एक जना नेपालीले अर्को नेपालीलाई दिने गरेको धम्कीले कसको के भलो गर्ला र । केही नेपालीका यस्ता गतिविधिले कतारको सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आन्तरिक मामिलाको मुटुमा प्रहार गरिरहेको छ । जो हिजो साँझ पनि दोहोरियो ।
एक जना नेपालीले अर्को नेपालीलाई दिने गरेको धम्कीले कसको के भलो गर्ला र । केही नेपालीका यस्ता गतिविधिले कतारको सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आन्तरिक मामिलाको मुटुमा प्रहार गरिरहेको छ ।
चटपटको आडमा लोकल रक्सी र बियरको धन्दा
पछिल्लो एक महिनादेखि नजिकैबाट नियाल्दा कर्नेसमा नाङ्लो पसल गर्ने, त्यसैकै आडमा बियर र अवैधानिक लोकल रक्सी बेच्ने गरेको पाइयो । कतारको महानगरपालिकाको गाडीले एक पटक सबै नाङ्ले पसलेको सामान जफत गर्दै बेच्न रोक लगायो तर आखिर नेपाली हुन् नि, किन टेर्थे र ? कर्मचारीहरूले नाकको धुरी काट्ने बित्तिकै चटपटको आडमा फेरि रक्सी बेच्न सुरु गरिहाले । सुन्दर कर्नेसको खजुरका रुख मुनी पसल फिँजाई हाले ।
कतारमा सुरा र सुन्दरीका कारण नेपालीको भिडन्त
कर्नेस जस्तो शान्त, शालीन र सभ्य स्थललाई रणभूमिमा परिणत गर्न शक्ति दिने भनेकै “रक्सी र प्रेम” हो । शुक्रवार राति सवा सात बजेबाट सुरु भएको नेपालीको भिडन्तको मुख्य जड युवती रहेको तिनै लडाकु मध्येका एक युवाले बताए । एक युवतीका कारण भिडन्तमा निधार फुट्ने गरी एक युवाले पिटाई खाए । त्यो लडाईँलाई साम्य पार्न सेक्युरिटी गार्ड तथा सँगै रहेका युवतीलाई पनि निकै सकस पर्‍यो । फिल्मी शैलीमा उफ्री उफ्री निर्घात कुटेका उनले मेरो साथीको “गलफ्रेन्डलाई टच” गरे पछि अर्को पक्षले पिटाई खानु परेको बताए ।
अमीरी आदेश २०१७ कानुन नं ५ को धारा ३/९/१०/११/१२ बमोजिम अनधिकृत रूपमा कुनै पनि बस्तुको बेचबिखन, भण्डारण, प्याकिङ, स्थानान्तरण र वितरण गरेमा एक वर्ष कैदसहित अधिकतम पाँच लाख रियाल सम्म जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुने सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको कुरा कतारी कानुन तथा श्रम एवं सामाजिक सरिया कानुनका ज्ञाता मोहम्मद रमजान अलि मियाँ बताउँछन् । मियाँका अनुसार सार्वजनिक स्थानमा मादक पदार्थ सेवन गरी हो हल्ला गरेमा शान्ति सुरक्षामा खलबलाउने कार्य गरेमा न्यूनतम छ महिना जेल तथा तीन हजार रियालसम्म नगद जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था धारा २७० मा तोकिएको छ । यसै गरी मद्यपान सेवन गरेको व्यक्ति सार्वजनिक स्थानमा फेला परेमा समेत उल्लेखित सजाय हुनेछ ।
सामाजिक अगुवाहरूको चासो भित्रको बेवास्ता
कर्नेसको झैझगडाको विषयमा कतारमा सामाजिक तथा विभिन्न सङ्घसंस्थामा आबद्ध रहेर कार्य गर्ने समाजका अगुवाहरूलाई चासो रहे पनि ती अवैधानिक कार्य कसरी रोक्न सकिन्छ भन्नेमा चिन्तन देखिएको छैन । केही नेपालीका कारण सिङ्गो राष्ट्रको बदनामी भइरहँदा नेपाली राजदूतावासले एउटा अनुरोध विज्ञप्ति र गैर आवासीय नेपाली सङ्घ कतारले राजदूतसँग भेटघाट गरेर सजग गराउने कार्य बाहेक अन्य गरेको देखिँदैन । सङ्घका उपाध्यक्ष उत्तम गुरुङले पनि दोस्रो पटक कर्नेसमा पाइला राखेनन् । गुरुङले आफू झगडा नियन्त्रणको लागि अधिकार प्राप्त व्यक्ति नरहेको र नेपाली राजदूतावास वैधानिक निकाय रहेको हुँदा यसको नियमन दूतावासले गर्नु पर्ने प्रतिक्रिया दिए ।
पत्रकारको व्यापक खोजी, भिडियो खिच्नेलाई समेत कुटे !
पाँच हप्तादेखि चलिरहेको ग्याङ फाइटको भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जाल तथा टिकटकमा हाल्नेहरूलाई समेत खोजी खोजी लडाकु समूहले कुटपिट गरेका छन् । पसिनाले निथ्रुक्क भिजेका र रक्सीले उभिन समेत नसक्ने अवस्थामा रहेका एक युवाले हाम्रो बारेमा युट्युब तथा केन्द्रबिन्दुमा समाचार सम्प्रेषण भएको आफूहरूले देखेको भन्दै ती दुवै पत्रकारलाई आफूहरूले भेटेमा कर्नेसमै सिद्ध्याउने धम्की मेरै सामुन्ने दिए त्यो पत्रकार म आफै हुँ र मलै नै पाएँ ।मैले मास्क लगाएका कारण उनीहरूले मलाई नचिने पनि मैले नियमित रूपमा गरिरहेको रिपोर्टिङ तिनीहरू समक्ष पुगेको पुष्टि भएको छ । कतार जस्तो संवेदनशील देशमा बसेर हरेक हप्ता एक न एक बहानामा नेपाली कुटिने कार्य रोकिनु पर्ने तर्फ मेरो कलम चलिरहेको छ । हामी जहाँ छौँ त्यो देशको कानुनलाई शिरोधार्य गरेर हामीले कतार तथा नेपालको नाम सँगसँगै उँचो राख्नु पर्ने हाम्रो कर्तव्य पनि हो ।
१८ आश्विन २०७७, आईतवार ११:५८
अक्टोबर महिनालाई खाडीमा गर्मीको आखिरी महिना मानिन्छ । त्यसैले होला कतारमा हिजो शुक्रवारका दिनमा त्यति घाम चर्किएको थिएन । विगत एक महिनादेखि कतारको पर्यटकीय स्थान कर्नेसमा केही नेपालीहरूले झम्के झालको सुरमा सुन्दरीका लागि मच्चाइरहेको वितण्डाको नियमित फलोअप गरेर ब्लग लेखिरहेको थिएँ । ब्लगको आशय त्यहाँ हुने अवैधानिक कार्यहरू रोकिनु पर्दछ र हामी सच्चिनु पर्दछ भन्ने मात्र थियो ।
विगत पाँच हप्ताका गतिविधिलाई प्रत्यक्ष नियाल्दा कर्नेसका केही “चुल्ठे मुन्द्रे” हरू र तिनका गतिविधिहरू रोकिने या फेरिने कुनै सङ्केत पाइएन । दिउसोको ३ बजे ३८ डिग्रीको गर्मीमा पार्कमा बसेर टनक्क लोकल रक्सी पिएर “मैले चाहे भने जे पनि गर्न सक्छु” भन्दै लटपटिएको बोलीले धम्की दिएको समेत देखियो,सुनियो । एक जना नेपालीले अर्को नेपालीलाई दिने गरेको धम्कीले कसको के भलो गर्ला र । केही नेपालीका यस्ता गतिविधिले कतारको सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आन्तरिक मामिलाको मुटुमा प्रहार गरिरहेको छ । जो हिजो साँझ पनि दोहोरियो ।
पाँच हप्तादेखि चलिरहेको ग्याङ फाइटको भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जाल तथा टिकटकमा हाल्नेहरूलाई समेत खोजी खोजी लडाकु समूहले कुटपिट गरेका छन् । पसिनाले निथ्रुक्क भिजेका र रक्सीले उभिन समेत नसक्ने अवस्थामा रहेका एक युवाले हाम्रो बारेमा युट्युब तथा केन्द्रबिन्दुमा समाचार सम्प्रेषण भएको आफूहरूले देखेको भन्दै ती दुवै पत्रकारलाई आफूहरूले भेटेमा कर्नेसमै सिद्ध्याउने धम्की मेरै सामुन्ने दिए त्यो पत्रकार म आफै हुँ र मलै नै पाएँ ।
मैले मास्क लगाएका कारण उनीहरूले मलाई नचिने पनि मैले नियमित रूपमा गरिरहेको रिपोर्टिङ तिनीहरू समक्ष पुगेको पुष्टि भएको छ । कतार जस्तो संवेदनशील देशमा बसेर हरेक हप्ता एक न एक बहानामा नेपाली कुटिने कार्य रोकिनु पर्ने तर्फ मेरो कलम चलिरहेको छ । हामी जहाँ छौँ त्यो देशको कानुनलाई शिरोधार्य गरेर हामीले कतार तथा नेपालको नाम सँगसँगै उँचो राख्नु पर्ने हाम्रो कर्तव्य पनि हो ।
Prevचितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा दुई महिनामा पाँच गैँडा मरे
एनआरएनए कोभिड-१९ तथ्याङ्क : विदेशमा ९२ प्रतिशत नेपाली कोरोनामुक्तNext
भगवानले सबै कुरा हेरिरहेका छन् यदि भने पक्कै पनि मेरा छुटेका दसैँहरूको हिसाब माग्नेछु
रोकिएन कर्नेसको अराजकता, दूतावासको अनुरोध पनि टेरेनन् नेपालीले
ब्लग : आत्महत्या !
भोकले डरलाई जित्ने रहेछ !